အမျိုးသမီးများအတွက် Retro ဆေးကြောထားသောခါးပတ်ပတ်လည်ဂျင်းဘောင်းဘီဘောင်းဘီ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အမျိုးသမီး ၀ တ် Retro ဆေးကြောထားသောအမြင့်ခါးတိုဂျင်းဘောင်းဘီရှည်
စပျစ်သီးပြွတ် / XL စပျစ်သီးပြွတ်အပြာ / XXL စပျစ်သီးပြွတ် / S စပျစ်သီးပြွတ် / M စပျစ်သီးပြွတ် / L ကို
အမျိုးသမီးဝတ်ဒီဇိုင်းဆန်းခါးအတိုဂျင်းဘောင်းဘီရှည် - စိမ်းပြာရောင် / XL backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အလှဆင်: Rivet, အတု Zippers, အဝတ်လျှော်
(၃) ပေါင်အကျယ် 46.8 49 51.2 53.4 55.6
(6) ခြေထောက်ဖွင့်လှစ် 23 24 25 26 27
(2) Hip အကျယ်
မှတ်ချက်။ အရွယ်အစားရွေးချယ်ရန်အရွယ်အစားဇယားကွက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ သင်၏အလေ့အထအရတိုက်ရိုက်မရွေးချယ်ပါနှင့်။ အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေချာဘူးလား။ သင်၏တာ ၀ န်၊ ခါးနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးတို့၏တိုင်းတာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသည်။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်အရွယ်အစားမှာ 2-3 စင်တီမီတာကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ သင်တိုင်းတာသည့်အခါသတိပြုပါ ရေအေးလက်လျှော်တစ်အကြံပြုချက်။ ၎င်းပစ္စည်းများသည်သူတို့၏ပုံသဏ္keepာန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်။
Parfait, comme la ဖော်ပြချက်!
အလွန်ကောင်းမွန်သောဂျင်းဘောင်းဘီအရွယ်အစား XL သည်ကျွန်ုပ်မ ၀ င်ဟုထင်သည့်အထုပ်မှဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါဂျင်းစ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုအထူးအကြံပြုသည်။ စူပါ, ပစ္စည်းအလွန်ကောင်းသောတင်းကျပ်စွာလမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်
သူကတကယ့်ကိုလှပပေမယ့်သူကသိပ်ပြီးမတော်ပါဘူး ဒါဟာကောင်းတဲ့စူပါ elastic ဖြစ်ပါတယ်
ငါလိုချုပ်ထားတဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ! ငါပါးလွှာခါးနှင့်မြည်းပတ်ပတ်လည်ရှိသည်! ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ခါးမှာဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ပြproblemsနာတွေကအမြဲတမ်းသေးငယ်နေတယ်၊ ​​ဒီစူပါတွေကထိုင်နေတယ်